Baro Tattoosyada Ubaxa Lavender | Tattoo
Tattoo Lavender: dhiirigelinta ubaxa
Susana Garcia | | Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta
ka Tattoos ubaxa ayaa shaki la'aan ugu quruxda badan taas waa la dooran karaa, sidaa darteed waxaan helnay dhiirigelinno badan. Tattoo-ga loo yaqaan 'Lavender tattoos' waa mid caan ah maxaa yeelay waa ubax jilicsan oo leh cod mararka qaar qaata magaca ubaxa oo loola jeedo midab guduud iyo lilac ah.
ka Tattoo lavender Badanaa waxaa sabab u ah sababaha bilicsanaanta, maxaa yeelay sidaan dhahno waa ubax u muuqda mid jilicsan, caato ah iyo midabkiisa qurxoon. Laakiin sidoo kale waxay leedahay macno kale sida daahirnimo iyo nasasho.
1 Tattoo Mini lavender
2 Lavender cabirkiisu weyn yahay
3 Tattoo gacanta
4 Tattoo Lavender on anqawyada
5 Lavender leh ubaxyo kale
Tattoo Mini lavender
Este Tattoo-gu wuxuu leeyahay cabbir aad u yar, sidaa darteed heerka faahfaahinta way adagtahay in la gaaro. Si kastaba ha noqotee, waxay ku guuleysteen inay si fiican u qabtaan ubaxa lavender, kaas oo si fudud loogu aqoonsan karo qaababkiisa iyo midabkiisa caadiga ah. Waxay u tahay tattoo fiican gacanta.
Lavender cabirkiisu weyn yahay
Hadaad rabto a faahfaahin aad u sareeya, waxaad u baahan doontaa tattoo aad u ballaaran. Xaaladdan oo kale waxaan aragnaa tattoo ah ubaxa lavender laakiin dhinaca, sidaas darteed waxay u oggolaaneysaa ubax kasta in lagu sawiro faahfaahintiisa. Midabaynta ayaa sii waday inay soo jiidato dareenka.
Xaaladdan oo kale waxaan ku aragnaa tattoo leh taabasho madow, taas oo midabka lavender uu si dhib yar u muuqdo iyo nooc kale oo leh magacyo qaar bilowga. Waa ubax ku habboon gacanta sababta oo ah dhererka, la qabsiga aaggan si aad u wanaagsan.
Tattoo Lavender on anqawyada
Mid kale oo ka mid ah meelaha aan ku dhejin karno tattoo-ka lavender wuxuu ku yaal anqawyada. Tattoo-yadaani waxay ku habboon yihiin ku dhowaad aag kasta.
Lavender leh ubaxyo kale
Si ma rabto inaad ku koobnaato midabka lavender-ka, waxaad leedahay ubax kale oo badan si aad u abuurto bouquet. Xaaladdan oo kale waxay doorteen casaan, in kasta oo huruud yahay midab si fiican ula socda lavender-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta » Tattoo Lavender: dhiirigelinta ubaxa
Tattoo Rudder: siinta jihada noloshaada